Adin’ny samy goavana, tsy misy manaiky ny hilefitra – Gasy Egypte
“Manana olana sy tsy fifanarahana goavana nandritry ny taona maro hatramin’izao I Egypta sy Ethiopia nohon’ny reniranon’I Neily (le fleuve du Nil, tsy haiko aloha na marina ilay dikan-teny). Raha misavorovoro ny mpanao politika Malagasy nohon’ny ady seza, dia ny firenena sasany kosa dia ny miady mba hametrahana lova tsara ho an’ireo taranaka.”
Mety mampanontany tena izao hoe: inona moa no tokony hampisy savorovoro amin’ny resaka rano? Tsy azo adino anefa fa ny rano no fototry ny aina: ny fiainana andavan’andro, ny fambolena sy mamelona ireo zava-maniry, ary azo ananganana foto-drafitr’asa ihany koa ny renirano iray.
Ity farany indrindra ary no mitarika ny olana misy eo amin’ireto firenena roa ireto; nanomboka ny taona 1961 no efa nanam-pikasana hanangana toha-drano lehibe ho famokarana herin’aratra I Ethiopia na ilay antsoiny hoe “Barrage de la Renaissance”. Araka ny vina dia mahatratra hatramin’ny 6000MegaWatt ny mety ho vokatra ary afaka hamatsy herin’aratra ireo firenena manodidina azy izy.Mbola betsaka tokoa ireo firenena toa an’I Soudan du Sud ohatra tsy manana mpamatsy sy foto-drafitr’asa mba ahazoana herin’aratra. Tsy neken’ny fanjakana Egyptiana anefa izany ka tsy sasatry ny nanemotra ny daty anombohana ny asa ry zareo ethiopiana.
Nahoana ny fanjakana Egyptiana no manana zo ny andà ilay tetik’asa? Tena hanany tokoa ny zo feno manohitra izay mety ho foto-drafitr’asa manohitohina ny fikorinan’ny renirano ka mety hampihena ny rano ho tonga eto Egypta, tsara ny manamarika fa avy any atsimo mian’avaratra izy io (du Sud vers le Nord). Misy mihintsy aza moa ny fifanarahana amin’ireo firenena andalovan’ny reniranon’I Neily manome an’I Egypta io zony io satria dia tsy mba manana loharano na ranon’orana ity farany fa miankina tanteraka amin’ny renirano ny famatsiana ny firenena sy ny vahoaka iray manontolo. Zava-dehibe ary tena sarobidy loatra raha ny renirano Neily ho an’I Egypta.
Ny taona 2010 anefa dia nataon’I Ethiopia ho toy ny tsy nisy ny fifanarahana tany aloha, nilaza ho mampihatra ny zony amin’ny fananany ihany koa ity farany ka nanomboka avy hatrany ny asa rehetra mba hahavita faran’izay aingana ilay toha-drano. Taitra ny fanjakana Egyptiana ka nangataka ny fiatoan’ny asa sy ny isian’ny fifampiresahana eo amin’ny roa tonta. Niravina kely aloha ny ady ny taona 2013 ary naka manam-pahaizana Frantsay izy ireo mba handinika ny mety ho voka-dratsin’ilay toha-drano indrindra ho an-dry zareo Egyptiana izay manahy mafy ny tsy hahatongavan’ny renirano intsony ka ho tafiakatra hatraty Egypta. Samy tsy nisy nanaiky ny hilefitra ny roa tonta koa dia nijanona fotoana fohy ihany ny asa ary nanararoatra ny korontana politika nisy teto Egypta ry zareo tany Ethiopia dia nitsangana eo amin’ny 70% izao ilay toha-drano ka mety ho vita tanteraka afaka herintaona eo ho eo. Rehefa hanomboka hameno ilay fitehirizan-drano amin’izay ry zareo ethiopiana dia hihena be izay tsy izy ny rano sisa ikoriana. Mandrahona ny ankilany fa mety ho tapaka hatramin’ny fifandraisana ara-diplomatika raha toa ka tsy misy ny marimaritra iraisana. Noho io toe-draharaha io indrindra dia tonga eto Egypta ny asabotsy 9 jona lasa teo ny praiministra ethiopiana hidinika amin’ny filohan’ny repoblika egyptiana.
Mampieritreritra ihany indrindra ho an’ny firenentsika Malagasy izay manana ny harena rehetra (vatosoa, rano, tany lehibe midadasika azo ambolena sy trandrahina, zava-boary…); ary afaka mampiasa ireo ankalalahana isika tsy iadivana amin’ny firenena hafa nefa toa zary olom-bitsy no manangana tetik’asa ho an’ny tombotsoany manokana sy amidy amin’ireo vahiny. Mila mahatsapa ny lanjan’ny harem-pirenena ny tsirairay, tena azo atao tsara ny mitondra ny anjara biriky ho amin’ny fanovana sy ny fampandrosoana an’I Madagasikara fa mila fahasahiana sy fahavononana.
13 Thoughts to “Adin’ny samy goavana, tsy misy manaiky ny hilefitra”
Thank you http://www.wikzy.com/user/profile/2687204
error, while I was researching on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round entertaining blog (I
Wellbutrin Xl 150 Buy Levitra Prix Baisse [url=http://cheapciali.com]generic cialis[/url] Viagra Acquistasi Canadianpharmacyonline Levitra Eye Problems Get Tab Worldwide Dutasteride In Internet Fedex Shop Propecia Economico [url=http://sildenafdosage.com]viagra[/url] Buy Generic Cialis Online Cialis 33 Anni El Cialis Es Bueno Site Serieux Vente De Kamagra Silagra 100 Uk For Sale [url=http://kamagpills.com][/url] Order Kamagra India Mens Meds Online Syphilis And Amoxicillin 1g Kamagra France [url=http://bpdrugs.com]cialis 5mg[/url] Cialis Overnight Cialis Viagra Farmacia [url=http://cialibuy.com]generic cialis canada[/url] Viagra Hombres Mayores Prednisolone Tablets Online Non Prescripion Compazine Will Clomid Help Deca Dick [url=http://adrugo.com]buy cialis[/url] Kamagra Kaufen Gunstig
Cheapest Propecia 40 Mg Buy Birth Control Online Fast [url=http://drugsor.com]buy viagra levitra[/url] Canada Drug Store Levitra 10mg Kaufen Generic Viagra Sold In Canada [url=http://catabs.com]priligy generico senza ricetta[/url] Value Pharmaceuticals Alpillsshop Zithromax Side Affects
Amoxicillin For Uti Amoxicillin Cheese Priligy Alcol [url=http://4rxday.com]buy cialis[/url] Cheap Viagra On Line Amoxicillin Looks Like Online Internet Pharmacy Conseguir Viagra Barcelona 500 Mg Cephalexin Capsules [url=http://leviplus.com]buy levitra in europe[/url] Viagra Kaufen Duisburg Where Can I Buy Elavil Cialis Generic Overnight Shipping [url=http://cialonlineno.com]cialis 40 mg[/url] Comprar Cialis Paypal Buy Alli Uk Celadrin Singapore Propecia Effects Testicular Pain [url=http://buylevi.com]why is levitra so expensive[/url] Como Tomar Compra Kamagra Where Can I Buy Discount Progesterone Medication Shop Offrir Amoxil secure ordering isotretinoin amex accepted low price Cialis 36 Stunden Compra Levitra Zaragoza [url=http://bpdrug.com]priligy 30 mg vademecum[/url] Farmacia Online Viagra 25 Mg 4 St
Retin A What Strength Does Itcome It Proscar Cabello Propecia [url=http://crdrugs.com]cheap cialis[/url] Kamagra Pas Cher France Foros Cialis Viagra Online Pharmacy Reviews 2013 Dapoxetina Romania How Can I Buy Warfarin 90 5 Mg [url=http://orderlevi.com]generic levitra online pharmacy[/url] Kamagra 50 Gel Oral Priligy Realmente Funciona Amoxicillin And Alcohol [url=http://tadalafonline.com]generic cialis[/url] Cialis 20mg 12 Stuck Preis
Uses For Flagyl And Keflex [url=http://cialvia.com]buy cialis online[/url] Levitra Sus Efectos Secundarios
Cytotec Avant Pause De Sterilet Accutane Tablets Buy [url=http://gemeds.com]diferencias entre sildenafil y kamagra[/url] Cialiis Fake Companies
Discount Stendra Want To Buy On Line Amex Accepted Tadalis Sx Pas Cher Buy Kamagra Droga [url=http://ac-hut.com]online pharmacy[/url] How Much Amoxicillin For 30 Lbs Vendita Levitra Generico Propecia Efectos Adversos
Probiotic Supplement Amoxicillin [url=http://genericviabuy.com]viagra[/url] Cialis Authentique Prix Can You Drink On Amoxicillin
Cost Of Viagra Vs Cialis Tomar Cialis Sin Necesitarlo [url=http://crdrugs.com]online cialis[/url] Cialis Krampfe
Zithromax Tinnitus [url=http://sildenaf75mg.com]viagra[/url] Free Shipping Progesterone Crinone In Internet Mastercard Accepted